ESri Lanka Tour ukusuka eBhubaneswar | Shayela ku: + 91-993.702.7574
Iipakethi zeTurkey zaseTurkey
ISri Lanka, eyaziwa ngokuba yiCeylon, isiqithi esincinci saseNdiya, e-Indian Ocean, kodwa yinto encinci kuphela eli lizwe elihle. Ngethuba laseSri Lanka Tour ukusuka eBhubaneswar iphakheji, uya kufumana iziganeko eziphefumulayo eSri Lanka. Iimpawu zayo ezahlukahlukeneyo ziphuma kwimimandla yamanzi kunye namasango omileyo kwiindawo ezilungileyo kunye namadlelo amanxweme. Izwe lidla impucuko yasendulo, iibhontshi ze-golden sandy kunye neentendelezo zezandla zekakhukhunta zazo, iintaba, kunye neerubhi kunye neefesi. Ngeentlanzi ze-Sandle 'I-Sri Lanka Tour ukusuka eBhubaneswar, unokufumana onke amava engqondweni ahlola iSri Lanka. Ngexa uhambele isiqithi, uza kubona ubugcisa bokoloni ukusuka kwiintsuku apho iPortugal, isiDatshi nesiNgesi zilawula. Uza kubona iindlovu ezininzi, ezinye zazo zithatha inxaxheba kwimikhosi yendawo kunye neengwe kwiindawo zasendle zasendle. ISri Lanka lizwe elicebile kakhulu ngokwembali, inkcubeko, kunye nenkcubeko. Kubakhenkethi abathanda ukufaka ingqalelo kwimbali yendawo nayiphi na indawo, iSri Lanka inikeza inxantathu yenkcubeko yabo. I-Sri Lanka Tour ukusuka eBhubaneswar iya kukushiya ixakekeke kuzo zonke izinto ezilungileyo zendalo. ISri Lanka yaziwa ngokuba ngamabhishi angaphandle kwaye ilanga legolide likhanya kulo lonke unyaka. I-Sri Lanka ibingca ngezinye iipaki zeSizwe eziphambili ezifana ne-Yala National Park, iWilpattu National Park, iPark yeSizwe ye-Minneriya, iPaki yeSizwe ye-Udawalawe ne-Horton Planes. I-Sri Lanka Tour ukusuka eBhubaneswar iya kukuvumela ukuba uhlolisise izulu elincinane eLwandle lwaseNdiya.
Inento yokunikela kuzo zonke iindawo zokuvakasha- Uthando lwendalo, abantwana, abanomdla okanye olunye uhlobo. Ukukhula kokhenketho eSri Lanka akukho mqondiso wokuyeka ukukhawuleza okanye kamva. Yenza incwadi yakho ye-Sri Lanka Pacationges Packages ngoku.
UKATUNAYAKE - KANDY - NUWARA ELIYA - IBENTOTA - IKOLOMBO
Ikhowudi yoKhenketho: 1001
USUKU 01: KATUNAYAKE-KANDY - 115 Kms ii-2.5 Iiyure
Ufike kwi-Airport yase-Bandaranaike, i-Katunayake efunyenwe ngummeli "Spiceland Colombo" kwaye udlulisele kwihotele eKandy ngePinwala.
Elephant Orphanage, iPinwala:
Indlu - izindlu zeendlovu zenkcubeko ezahlukeneyo kunye nokutya, ukuhlamba, ukudlala kunye kunye nokuqhathanisa. Ezi zifunyanwe zilimele okanye zishiywe ehlane. Kukho namathole amancinci azalwe ekuthunjweni.
Itheyibhile yexesha leNtandane:
08.30am Ukuvula i-orphanage kwiindwendwe
I-09.15am-Ukunyusela ibhotile kwintsana zeendlovu
10.00am kubhakabhaka kwamanzi kwi 'Ma Oya'
12noon Izindlovu zibuyela kwintandane emva kokuhlamba
01.15pm-Ukuncelisa ibhokhwe umntwana osindlovu
02.00pm Ubusuku bokuhlamba e-'Ma Oya '
04.00pm Izindlovu zibuyela kwintandane emva kokuhlamba
05.00pm-Ukuncelisa ibhokhwe umntwana osindlovu
06.00pm Ukuvala i-orphanage yeendwendwe
Ifumaneka kwindlela ehamba phambili phakathi kweColombo kunye nenkunzi yentaba yaseKandy. Ukutyelela kwintsimi ye-spice eHingula eMawanella ukubona iintlobo ezininzi ezahlukeneyo zeziqholo zaseSri Lanka ziyaziwayo. I-Cinnamon, i-Cardamom, i-Pepper, i-Cloves kunye ne-nutmeg iye yahlakulela loo ndawo. Ukongeza kwimizi nganye yeziqholo, ilifa lithengise inguqu yalo ye-Sri Lankan curry powder.
Ithempeli Leli Ngayo Inyolo, uKandy:
Ithempeli leNgqungquthela yamazinyo eyingcwele yeBuddha Ngaba ithempile ebaluleke kakhulu kwi-Sri Lankan Buddhist kwaye yakhiwa kwi-16th Century AD ngu-King Wimaladharmasooriya, kuphela ngenjongo yokwakha indlu yezinyo.
Ukutya kunye neDinner Ubusuku bokulala buhlala ehotele e-Kandy.
USUKU 02: KANDY - NUWARA ELIYA - 77 Kms - 3.5 Hrs
Imfesi yeSidlo sasekuseni kwiHhotela eKandy & ikhefu ku-Nuwara Eliya ngePerdeniya naseRamboda.
I-Royal Botanical Garden, ePeradeniya:
Le nto yayingumyezo wokuzonwabisa wenkosi yaseKandyan ye16th Century kwaye kamva yenziwe kwiJardin Botanical ngexesha lolawulo lwaseBrithani.
Iiyure zokusebenza: 7.30am - 5.00pm (imihla ngemihla)
Irestyu kunye neefesi: 10.00am - 5.00pm
Gem Museum ("Tiesh" yiLakmini):
I-Tiesh eyaziwa ngokuba yiLasmini Pvt Ltd ibe yindawo eyingqungquthela yamatye anqabileyo kunye nobucwebe obuhle kakhulu obunobunono obugqithiseleyo kunyaka. Phakathi kwamatye anqwenelekayo aseSri Lankan ayingcambu emhlabeni jikelele i-Blue Sapphires, i-Star Sapphires, iRubies, i-Star Rubies, i-White Sapphires, i-Yellow Sapphire, iIjisi ze-White, kunye ne-Etc. amagugu e-Sri Lanka. Eyona ndawo ifumaneke entliziyweni yeSri Lanka kwisixeko esipheleleyo seCandy "iTiesh" Ixhamla kuzo zonke iinqununu zabaxhasi. I-Tiesh yiLakmini iye yaphambi kwezinto ezidlulileyo zemihla ngemihla kwiimpawu zobunxibe kusukela ekuqalweni kwayo kwi-1997.
I-Mackwoods Labookellie I-Tea Centre:
Iimeko ezimalunga nama-1500 amitha ngaphezu kweselwandle entliziyweni yeLabookellie Estate, enye yezityalo ezikhethiweyo zeTai eSri Lanka, namhlanje isitima esithandwayo kwiindawo ezihamba ngamazwe ngamazwe okubonelela ithuba lokufumana i-Mackwoods Tea efanelekileyo kwiindawo ezisezintabeni zentaba kunye nokubonelela ngeengcamango zokufundisa i-Ceylon Tea. I-Labookellie Tea Centre ebiye yaba ngumhlaba ophawulekayo phakathi kwabo bobabini kunye nabakhenkethi kwiNuwara-Eliya evela eKandy ngenxa yeemfuno zabo zokutya ezitsha eziphezulu ze-Labookellie Tea. Iziko leTe liye landiswa kwaye lihlaziywa ukunika iindwendwe ezininzi kunye nabathengi beenkonzo ezingcono kwiimeko ezifanelekileyo. I-Mackwoods inikela iindwendwe ngeholide ekhokelwa ngokukhululekile ye-Labookellie itiye yefayili, amava ezemfundo ekulimeni kweeyi kunye nenkqubo yokuvelisa.
I-Gliding ngokukhawuleza ehla entabeni yeentaba, amahlathi amanqabileyo kunye neentlambo ze-Tea Estates, iifudlana ezincinane eziguqulwayo kwiindawo eziphakamileyo ezisemaphandleni zizalela ezinye zee-pitfalls ezihle kakhulu zaseSri Lanka, enye yazo "iRamboda Waterfalls" e-Nuwara Eliya. Ukuhlaselwa phantsi kwe-3200ft. I-Ramboda Falls izisa ubuqaqawuli kunye nenkazimulo kule siqithi elihle eyenza iSri Lanka ithandwendwe elidumileyo lokuvakashela i-romantic and escape lover.
Ukutya kunye neDinner Ukulala ebusuku kwihotele e-Nuwara Eliya.
ISUKU 03: UNUWARA ELIYA - BENTOTA - I-240 Kms - Iiyure ze-5.5
Indlokufesi kwihotele e-Nuwara Eliya kwaye ushiye iBentota
Ukutya kunye neDinner Ukuhlwa kokulala kuHhotele e-Bentota.
ISUKU 04: IBENTOTA - I-COLOMBO - I-65 Kms - Iiyure ze-2
Isidlo sakusasa kwi-Hotel, iBentota kwaye ushiye iColombo
I-Turtle Hatchery, iKosgoda:
Iiprojekthi ziye zaqaliswa ukugcina uluntu oluninzi olufikelela ekupheleni, kwaye iiprojekthi zifunyenwe ngaselunxwemeni olusezantsi laseSri Lanka apho ii-turtles zifika khona ukuze zibeke amaqanda. Ihomba libhoba umngxuma kwiBhangi, Ibeka amaqanda ayo kwaye iwagubungele ngesanti apho kufuneka ukuba, iqhutshwe ngumlilo welanga. Oko kwenzeka njalo, amaqanda adumbwe ngumlobi kwaye athengiswa ngabantu ababadlayo. Kodwa ngoku amaqanda athengwa ngamaprojekti alondolozo kwaye atyathwa ngendlela engokwemvelo kwiindawo ezifihliweyo apho iintaka zingenalo ithuba lokuzikhetha kwaye iintsana zivumeleke elwandle emva kweentsuku ezimbini kwixesha lokulala elinika ithuba elingcono lokusinda.
EColombo City Tour:
Shayela kwindawo yecandelo lezoshishino kunye nedolophu ebizwa ngokuba yi-Fort, eyakhiwe yiPutukezi kwi-16 yekhulu leminyaka. Ukutyelela iimarike ezixakekileyo kunye ne-bazaars yasePetta, tyelela i-Buddhist nethempeli lamaHindu, isonto elidala laseDutch kwaye uqhubekele kwiindawo zokuhlala zaseCinnamon Gardens. Dlulela kwiHolo leKapa, ​​i-Independence Square kunye ne-BMICH (i-International Convention Centre).
Ukuthenga kuyo; (kumdla)
indlu yohlobo lweFestile
Isixeko saseLiberty Plaza
Ukutya kunye neDinner Ukulala ebusuku kwihotele e-Colombo.
ISUKU 05: I-COLOMBO - IKATUNAYAKE - 37 Kms - I-1 Iyure
Indlovulo yokutyela ehotele eColombo.
Ngokwexesha lokuhamba kwendiza yakho ye-Airport ye-Bandaranaike, i-Katunayake yokuSuka. Ukuphela khenketho.